La Petite - Durbanville - Flat yonke - I-Airbnb
La Petite - Durbanville - Flat yonke
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguJacques
ILa Petite Flatlette, yindawo yokuhlala yabucala ene-quint ezaliswe ngumtsalane kunye nokusebenza.
Ngethoni ephantsi yesiFrentshi i-flatlette yethu iyakwamkela ngobuqhetseba, ngelixa i-intanethi ekhawulezayo ephezulu iqinisekile ukuba izakuqhagamshelanisa nehlabathi.
Umgama ongama-30 ukuya kwimizuzu engama-45 ngemoto kulo naliphi na icala (itrafikhi ixhomekeke) inokukusa e-V&A Waterfront (kwiziko leSixeko), iBlouberg Beach enembonakalo yayo entle yeTable Mountain okanye ilizwe elihlala ePaarl, eStellenbosch okanye eFranschoek.
ILa Petite Flatlette yamkela ihlabathi.
Le ndawo ilungele izibini, abahambi abangatshatanga kunye namadoda amashishini okanye umfazi.
Akuvumelekanga izilwanyana ezinoboya okanye ezinamakhwekhwe.
Ibekwe kumda weDurbanville ubumelwane bethu buzolile kukho inja okanye ezimbini ezinencoko yokhuseleko. Ukuhamba nge-10min kuyakusa kwindawo yokuthenga yengingqi eneSpar, ikhemesti, ivenkile yotywala, isinxibo seenwele, ivenkile yebhayisekile, ii-ATM, iqula lamanzi lasekhaya kunye nevenkile yokulungisa iiselfowuni/selfowuni. Apho unokudibana nabahlali njengoko begqiba imini “ngento ebandayo”.
Sineziko lezonyango elikum-500m ukusuka ekhaya-uGqirha jikelele kunye nogqirha wamazinyo
Ukulangazelela ukuhamba - jonga ifoto yethu yoluhlu kwaye ubone ukhenketho lweGreen Belt - oku kuya kukuthatha kwindawo esihlala kuyo - udlule kuwo onke amadama, amadada kunye neentlanzi. Thatha uhambo lwe-30min okanye ngaphezulu kweeyure ezi-2
My wife and I have been host's since 2017 and just love hosting guests at La Petite. Although we have been doing this for 3-years we still get very excited with every new guest booking. We look forward to you enjoying your stay in our little place and hearing from you on how we can improve on it...
My wife and I have been host's since 2017 and just love hosting guests at La Petite. Although we have been doing this for 3-years we still get very excited with every new guest boo…
Ukusebenzisana nondwendwe kugcinwa kubuncinci njengesiqhelo
Siyakuthanda ukudlala isikhokelo sokuhamba se-amateur kwaye ukuba iindwendwe zinqwenela ukuphonononga iCape Winelands kunye nathi inokulungiswa...
Sikwakonwabela ukusingatha i-"local braaivleis", i-open fire, inyama kunye namabali ekwabelwana ngawo. Kanye njengemihla yakudala.
Siyakuthanda ukudlala isikhokelo sokuhamba se-amateur kwaye ukuba iindwendwe zinqwenela ukuphonononga iCape W…